musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Boeing inosundidzira vatakuri vatsva 737-800BCF
avhiyesheni • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako!
Boeing yakazivisa hurongwa hwekuvhura mitsara mitsva mitatu yekuchinjisa uye yakasaina hurongwa hwakasimba neIcelease ye11 737-800 Boeing Converted Freighters. (Mufananidzo wechikwereti: Boeing)
Sezvo kudiwa kwepasi rose kwevanotakura zvinhu kuri kuramba kuchikwira, Boeing [NYSE: BA] nhasi yakazivisa hurongwa hwekuwedzera mitsara mitatu yekutendeuka ye737-800BCF inotungamira pamusika kuNorth America neEurope. Iyo kambani yakasainawo odha yakasimba neIcelease yegumi nerimwe yevatakuri semutengi wekuvhura imwe yemitsara mitsva yekutendeuka.
Muna 2022, kambani ichazarura mutsara mumwe chete wekushandura paBoeing's London Gatwick Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) nzvimbo, iyo ye-state-of-the-art hangar muUnited Kingdom; uye mitsetse miviri yekutendeuka muna 2023 paKF Aerospace MRO muKelowna, British Columbia, Canada.
"Kuvaka nzvimbo dzakasiyana-siyana uye dzepasi rose dzenzvimbo dzekushandura kwakakosha kutsigira kukura kwevatengi vedu uye kusangana nezvinodiwa munharaunda," akadaro Jens Steinhagen, director weBoeing Converted Freighters. "KF Aerospace nevatinoshanda navo muBoeing kuLondon Gatwick vane zvivakwa, kugona, uye hunyanzvi hunodiwa kuendesa Boeing Converted Freighters inotungamira pamusika kune vatengi vedu."
"Tinofara zvikuru kuwedzera hukama hwedu neBoeing," akadaro Gregg Evjen, mukuru anoshanda, KF Aerospace. “Tanga tichishanda neBoeing product line kwemakore anopfuura makumi matatu. Neruzivo rwedu rwekushandura kutakura zvinhu, vashandi vedu vane hunyanzvi uye zvese zvinodiwa zvehunyanzvi zvagara zviripo, takagadzirira kuenda kubasa nekubatsira kushandira vatengi veBoeing.
Kune Icelease, iyo ichangobva kuwedzera kushandira pamwe kwayo neCorrum Capital kuburikidza nemubatanidzwa unonzi Carolus Cargo Leasing, odha yegumi nerimwe 737-800BCF ichave yavo yekutanga kushandurwa yekutakura zvinhu neBoeing. Mudzidzisi ndiye achave mutengi wekutanga wekushandura paBoeing's London Gatwick MRO nzvimbo.
"Tine chivimbo mumhando uye rekodhi yakashandurwa yeBoeing's 737-800 yakashandurwa kutakura zvinhu, uye tinofara kuve mutengi wekuparura nzvimbo yavo itsva yeLondon MRO," akadaro Magnus Stephensen, mukuru wepaIcelease. "Tinotarisira kuunza mutakuri wezvikepe mungarava dzedu kuti ashandire vatengi vedu vari kukura pasi rose vachishanda nzira dzepamba uye dzenguva pfupi."
Pakutanga gore rino, Boeing yakazivisa kuti yaizogadzira imwe 737-800BCF yekutendeuka simba munzvimbo dzakati wandei, kusanganisira yechitatu yekutendeuka mutsara kuGuangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO), uye mitsetse miviri yekutendeuka muna 2022 nemutengesi mutsva, Cooperativa Autogestionaria de Servicios. Aeroindustriales (COOPESA) muCosta Rica. Kana mitsara mitsva yatanga kushanda, Boeing ichange iine nzvimbo dzekushandura muNorth America, Asia neEurope.
Boeing inofanotaura nezve 1,720 kutakura kutakura zvinhu zvichadikanwa mumakore makumi maviri anotevera kuti zvizadzise zvinodiwa. Pakati pavo, chiuru nemazana maviri ichave yakajairwa-muviri shanduko, inosvika makumi maviri muzana yezvido izvi zvichibva kune vatakuri vekuEurope, uye 20% vachiuya kubva kuNorth America neLatin America.
Iyo 737-800BCF ndiyo yakajairwa musika wekutakura zvinhu mutungamiri ane mirairo inodarika mazana maviri uye zvisungo kubva kuvatengi gumi nevapfumbamwe. Iyo 200-19BCF inopa kuvimbika kwepamusoro, kuderedzwa kwemafuta, kuderera kwemitengo yekushanda parwendo uye pasi rose-kirasi-mu-sevhisi rutsigiro rwehunyanzvi kana uchienzaniswa nevamwe vakajairwa-muviri wekutakura. Dzidza zvakawanda nezve 737-800BCF uye yakazara Boeing freighter mhuri pano.